व्यवस्था फेरियो, चरित्र फेरिएन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
व्यवस्था फेरियो, चरित्र फेरिएन
सरकारले गर्ने हरेक कामले कि लोकतन्त्रलाई बढाउँछ कि घटाउँछ । सरकार त माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने र माघीमा बिदा नदिनेजस्ता निर्णयले के लोकतन्त्रलाई बढाएको छ ?
वैशाख ११, २०७५ शम्भु थापा
काठमाडौँ — राजाले हारेको र नागरिकले जितेको दिन हो, वैशाख ११ । राजाले संविधानलाई आफ्नो हातमा लिंँदै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष आफैं भए । नेता र क्रियाशील नागरिकलाई बन्दी बनाए । संविधानले चिन्दै नचिनेका डा. तुलसी गिरी, कीर्तिनिधि विष्ट जस्तालाई उपाध्यक्ष बनाए । उनको शासनमा पत्रकारका हात बाँधिएको थियो ।
बाबु महेन्द्रले २०१७ मा ल्याएको एकतन्त्रीय दलविहीन व्यवस्थालाई उनले दुरुस्तैसँग सुरुवात गरेका थिए । यसरी नेपाली जनताको अधिकार समाप्त गरेका कारण आम नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । प्रजातान्त्रिक हावा नपाएका कारण उनीहरू उकुस–मुकुस भएकाले पनि आन्दोलनमा जनसागर उर्लिएको थियो ।
बाँकी विश्वका मानिस स्वतन्त्रता र समृद्धिको संसारमा पंख फिंँजाइरहेका बेला हामीकहाँ अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको थियो भने सशस्त्र द्वन्द्वले आम रूपमा असुरक्षा बढिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा तानाशाहका रूपमा उदाएका राजाको शासनले कुनै निकास दिन सक्दैन भन्ने महसुस सामान्यभन्दा सामान्य मानिसलाई भइसकेको थियो । त्यसो हुनाले उनीहरू ज्यानको परवाह नगरी सडकमा उत्रिए । गोली खाए, तर डगमगाएनन् । नेताहरू जेलमा थुनिएकाले त्यतिबेला आन्दोलित जनमानसलाई नेतृत्व दिने काम गरेका थिए, नागरिक अगुवाहरूले । बार र प्रेस यसमा अग्रस्थानमा थिए । उनीहरूको जीवन निकै खतरामा पनि थियो । आन्दोलनका क्रममा जति मानिस सडकमा त्यसअघि कहिल्यै निक्लेका थिएनन् । त्यसपछि पनि आजसम्म निक्लिएको मैले देखेको छैन ।
लोकतन्त्र बहाली भएकै दिन खुलामञ्चमा त्यो जनसमूहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । मानिस विशेषत: गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कुरेर बसिरहेका थिए । उनी आएनन् । दम बढेकाले सासै फेर्न गाह्रो भएको भन्दै उनले सुशील कोइरालाई पठाए । उनले कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद दुबैको प्रतिनिधि भएर म आएको छु भन्दा मानिस अचानक आक्रोशित भए । ढुंगामुढा हुन थाल्यो । सभाको अध्यक्षता गरेका ध्यानगोविन्द रञ्जितले आत्तिएर कार्यक्रम विसर्जन गरे । मलाई चाहिँ यी आन्दोलित मानिसले कुनै हानि गर्छन् भन्ने लागेन । योगेश भट्टराई उद्घोषक थिए । मैले उनलाई उद्घोषण जारी राख्न आग्रह गरेँ, अनि भनेँ, ‘जनतालाई सम्बोधन हुनैपर्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन । कार्यक्रम अघि बढाऔं ।’
बारलाई नेतृत्व गरेर त्यो असाधारण सभालाई सम्बोधन गर्न म पुगेको थिएँ भने प्रेसको नेतृत्व गर्दै त्यतिखेर पत्रकार महासंघका सभापति विष्णु निष्ठुरी पुगेका थिए । सात दलका प्रतिनिधिहरू थिए । तर माओवादीहरू भूमिगतै भएकाले मञ्चमा उनीहरूका कुनै नेता थिएनन् । जनसागरमा भने माओवादीहरू प्रशस्तै छन् भन्ने प्रस्टै थियो । पहिलो सम्बोधन मलाई गर्न भनियो । जनताले गिरिजाप्रसाद साँच्चै बिरामी भएर आउन नसकेका हुन् कि संविधानसभाको घोषणा गर्न डगमगाएर आउन नसकेका हुन् भन्ने मेरो मुखबाट सुन्ने इच्छा जाहेर गरे । मैले बिरामी भएरै आउन नसक्नुभएको जानकारी गराएँ । र जनसागरले ममाथि विश्वास पनि गर्‍यो । दोस्रो वक्ता थिए, विष्णु निष्ठुरी । उनले भने, ‘अब नारायणहिटीमा जनताको छोरा बस्छ ।’ अरूले त्यसरी बोलेका थिएनन् । मैले बुझेसम्म जनसागरलाई राजतन्त्र जान्छ भनेर त्यसरी भन्ने उनी नै पहिलो वक्ता हुन् । हामीले त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।
राजनीतिक तहमा त संविधानसभा र गणतन्त्रबारे अन्योल थियो । माओवादी बाहेक संविधानसभाको माग पहिलोपटक संस्थागत रूपमा राख्नेमा नेपाल बार थियो । ती तमाम आन्दोलनकारीको मनमा पनि गणतन्त्र र संघीयताको माग प्रस्ट रूपमा थिएन । बारकै धेरै साथीहरूको मान्यता पनि संविधानले मान्यता पाउनुपर्छ र राजनीतिक अधिकार खुला हुनुपर्छ भन्नेमात्रै थियो । यस्तोमा त्यो जनसागर गिरिजाप्रसादको मुखबाट संविधानसभाको एजेन्डा सुन्न चाहिरहेको थियो । यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि नेतृत्व पंक्ति र आम नागरिकको एजेन्डामा किन कुनै एकरूपता देखिएन भन्ने प्रश्न यहाँनिर विचार गर्नु जरुरी छ ।
हामीकहाँ १०४ वर्षको जहानियाँ राणाशासनले जनतालाई पुरै अन्धकारमा राख्यो । हो, त्यो समय संसार युद्धमा होमिएको थियो । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका जताततै युद्ध थियो । त्यसमा हामी पनि थियौं । तर युरोपतिर युद्धका साथसाथै राजनीतिक परिवर्तनमा पनि नागरिक सत्तासीनसँग आमने–सामने थिए । हामीकहाँ भने राणाशाहीले सामान्य मानिसलाई शासनमा सामेल गर्न त परै जाओस्, पढ्न र लेख्न पनि दिएन । यो क्रम एक सय चार वर्षसम्म मात्रै चलेन । राणाहरू ढलेपछि फेरिएको व्यवस्थामा पनि जनआकांक्षाले ठाउँ पाएन । जनताले सत्तासम्म आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सकेनन् ।
पञ्चायतको समाप्ति र लोकतन्त्र पुन:स्थापनापछि अनेक राजनीतिक कलहले गर्दा जनतालाई सत्ताको साँचो जानकारी दिइएन । नागरिक सत्ताको रसायन कसरी बन्छ र फेरिन्छ भन्ने कुरामा जनताले अझै आफूलाई केन्द्रमा पाएका छैनन् । केवल सत्तामा बस्ने मानिस फेरिए, तर चरित्र उस्तै छ । शासन व्यवस्थाले नागरिकलाई प्रविधि, शिक्षा र विज्ञानसँग जोड्न सकेन । नेताहरू ‘हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ’ भन्छन् । तर हरेक देशका लागि त्यस देशको संविधान उत्कृष्ट नै हुन्छ । संविधान उच्च हो कि तुच्छ भन्ने त सरकारले कस्तो काम गर्छ र नागरिकले के अनुभूत गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । लेखिएका धारालाई नै उत्कृष्ट भन्नु त संविधानलाई नबुझेको ठहर्छ ।
माइतीघर मण्डला भनेको विरोधको पर्याय हो । सरकारले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्न बन्देज लगाउँदैछ । अब १६ गतेदेखि त्यहाँ विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी आदेश जारी भएको छ । विरोध देखिनेगरी हुन्छ र हुनुपर्छ । तर सरकार विरोधजति ओलाङचुङगोला गएर गर भन्न खोज्दैछ । मण्डलामा विरोध गर्न नदिने निर्णयको आशय के हो ? एक नागरिकका हिसाबले हामी त्यो सहन सक्दैनौं ।
उत्कृष्ट संविधान हो भने यो देशमा यति चरम भ्रष्टाचार हुने थिएन । न्यायालयदेखि कार्यपालिकासम्म भ्रष्टहरूको रजगज हुने थिएन । एक रुपैयाँ लगानी गर्न नपर्ने तर रातारात जीवन फेरिने भ्रष्टहरूको ठूलो जमात लोकतन्त्र आएको आजैका दिनपछि जन्मिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनै हेरे त्यो छर्लङ्ग हुन्छ । भ्रष्टाचारको त्यो पैसा धनाढ्य र ठूला व्यापारीहरू चलाउँदैछन् । दस–बीस लाखको त भ्रष्टाचारै होइन भन्नेजस्तो अवस्था आयो । अब त भ्रष्टाचार करोड र अर्बमा हुन थाल्यो । जहाज किन्दा, अस्पतालका सामान किन्दा र राज्यका अरू तमाम काममा भ्रष्टाचार ठूलै रूपमा भइरहेको छ । खोजमूलक पत्रिकाको संयन्त्र र हामी कानुन व्यवसायी तथा क्रियाशील नागरिक यसतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यस्तो भइरहँदा हिजो परिवर्तन गर्छु भनेर हिँडेका नेता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? तिनले सुशासनको कमान सम्हाल्नुपर्ने होइन ? तर भ्रष्टाचारमा सबभन्दा पहिले त्यही पंक्ति डुबेकाले प्रशासनतन्त्रदेखि न्यायालयसम्म विरूप हुनेगरी भ्रष्ट भइसकेको छ । एकातिर भ्रष्टहरूको यस्तो बिगबिगी छ, अर्काेतिर त्यतिबेला नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नेहरूलाई खोजी–खोजी मुद्दा चलाउने काम तिनै भ्रष्ट नाइकेहरूले गरिरहेका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दीक्षितलाई साझा यातायातमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर ‘बापवैरी’ साँध्नेगरी मुद्दा लगाए । अनुसन्धान गर्दा एक पैसा तलमाथि नभएको देखिएपछि ‘तिम्रो पैतृक सम्पत्ति धेरै रहेछ, तिम्रा बाले बेलायतमा लगानी गरेका रहेछन्’ भन्नेजस्ता पत्रु र हाँसो उठ्दो अभियोग लगाएर मुद्दा चलाए । त्यसरी प्रतिशोध साँधिएका मुद्दाका सम्बन्धमा कोही पनि एक शब्द बोल्दैनन् । न कुनै नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बोल्छन् । जसले लोकतन्त्रमा जनता जगाउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो, उसलाई त्यही तन्त्रमा हुँदो न खाँदोको मुद्दा लगाएर दु:ख दिँदा के प्रधानमन्त्रीले चासो लिनु पर्दैन ? के भएको रहेछ भनेर सोध्नु पर्दैन ?
यहाँनिर ममाथि लगाइएको अभियोग र चलाइएको मुद्दाको म कुनै जिकिर गर्न चाहन्न । तर पनि सोध्न मन छ, के त्यो सही थियो ? थिएन भने राज्यका निकायमा बस्नेहरूले आफू मातहतको संयन्त्रबाट भएका रिसइवीपूर्ण र प्रतिशोधी क्रियाहरूको जिम्मा लिने वा त्यसलाई निस्क्रिय पार्ने कुनै अभिव्यक्ति दिनु पर्दैन ?
धेरै पर जानु पर्दैन, भारतकै उदाहरण काफी छ, आजादीका लागि लड्नेहरूलाई कस्तो कदर गरिन्छ भन्ने । स्वतन्त्रताका सेनानी प्रत्येकलाई त्यहाँ राज्यले सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू दिएको छ, चाहे रेल चढ्दा नै किन नहोस् । त्यो भनेको हरेक पल राज्यले स्वतन्त्रतामा सामेल भएकाहरूसँग गरेको संवाद हो । खोइ हामीकहाँ यस्तो ? सहुलियत त परको कुरो, झुठा मुद्दा लगाएर अनेक सास्ती दिँदा पनि त्यही आन्दोलनको रापतापले सत्ता–सुख भोगिरहेकाहरू यसबारे मौन बस्छन् । यस्तो पनि हुन्छ ? यस्तो होला भनी मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिएनन् । तिनको एक आकांक्षा थियो– समृद्ध र स्वतन्त्र जीवनको जो अझै पूरा भएको छैन । समृद्धिका लागि हामी दुई देशबाट रेल कुदाउने, पर्यटकहरू भित्र्याउने इत्यादि भनिरहेका छौं । तर त्यसका लागि हामी कति तयार छौं ? हाम्रो संयन्त्र कति तयार छ ? सरकार खालि चीन र भारतको मुख ताकेर हिँडिरहेको छ । नागरिकले चाहेको कुनै देशप्रतिको निर्भरता होइन । आत्मनिर्भरता हो ।
सरकार त माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने र माघीमा विदा नदिने जस्ता निर्णयहरू गरेर बसिरहेको छ । यस्तो कुरामा त व्यापक जनसहभागितामा छलफल गरेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । सरकारले गर्ने हरेक कामले कि लोकतन्त्रलाई बढाउँछ कि घटाउँछ । यी निर्णयहरूले के लोकतन्त्रलाई बढाएको छ ? निश्चय पनि छैन । यसले त सरकारको कदसमेत पनि घटेको छ । व्यवस्था र व्यक्तिमात्रै फेरिए, तर शासन गर्ने मानसिकता भने पुरानै भएकाले यस्तो भएको हो । जनआन्दोलन केवल व्यवस्था र व्यक्ति फेर्न भएको थिएन । शासनको मूल चरित्र फेर्न भएको थियो । तर त्यो फेरिएको जस्तो देखिँदैन ।
जनआन्दोलनमा क्रियाशील नागरिक अगुवामध्येका एक नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष थापासँग घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:३८
वैशाख ११, २०७५ सुबास हुमागाईं
काठमाडौँ — पहिलो दुई दिनको उत्कृष्ट लय जारी राख्दै भारतले आठौं दक्षिण एसियाली जुडो च्याम्पियनसिपको अन्तिम दिन टिम इभेन्टतर्फ दुवै स्वर्ण जितेको छ । पुरुषतर्फ पाकिस्तानलाई हराएको भारतले महिलातर्फ घरेलु टोली नेपालमाथि वर्चस्व राख्दै स्वर्ण जित्यो । भारतले व्यक्तिगत स्पर्धाको महिलातर्फ सबै ७ स्वर्ण र पुरुषमा ३ स्वर्ण जितेको थियो ।
आठौं दक्षिण एसियाली जुडोमा सोमबार महिला टिमतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालकी फुपुल्हामु खत्री (सेतो) र भारतीय सुनीवाला देवी । महिला टिममा रजत पदक जितेको नेपाली टोली । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
लगनखेलस्थित सेनाको शारीरिक प्रशिक्षण तथा खेलकुद केन्द्रमा सोमबार महिलातर्फ भारतले नेपाललाई ५–० गेमले पराजित गर्दै स्वर्ण पक्का पारेको थियो । नेपालकी देविका खड्का ५२ केजी तौल समूहमा सुशीलदेवी लिकम्बमसँग १६ सेकेन्डमै इप्पोन खाँदै हारिन् । लगत्तै मनीता प्रधान श्रेष्ठ पनि ३३ सेकेन्ड बाँकी रहँदा १–० ले अगाडि हुनुका बावजुद अनिता अंगोम चानुले २० सेकेन्ड पिन गरेपछि इप्पोनका आधारमा पराजित भइन् । ६३ केजीमा फुपुल्हामु खत्री सुनिवाला देवी हुइड्रोमसँग १–० ले हारेपछि भारतको पदक पक्का भयो ।
त्यसपछि भाततीय गरिमा चौधरीले भावना घर्तीमगरलाई २९ सेकेन्डमा हराउँदा पुनम श्रेष्ठ टुलिका मानसँग पराजित भइन् । नेपाली टोली श्रीलंका र बंगलादेशलाई हराउँदै फाइनल पुगेको थियो । पाकिस्तान भने भारतसँग सेमिफाइनलमा पराजित भयो । तेस्रो स्थानको खेलमा पाकिस्तानले बंगलादेशलाई ४–१ गेमले हराउँदै कांस्य जित्यो ।
पुरुषतर्फ टिम इभेन्टको सेमिफाइनलमा नेपाल पाकिस्तानसँग ५–० ले पराजित भयो । नेपालबाट इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, संजित डंगोल, मनीष महतो, रमेशबहादुर चन्द र रविन श्रेष्ठले खेलेका थिए । तेस्रो स्थानको खेलमा इन्द्र र संजितले पहिलो दुई खेल जित्दै २–० को अग्रता दिलाए । श्रीलंकाली खेलाडीले त्यसपछिका तीन खेल जित्दै कांस्य पदक आफ्नो पोल्टामा पारे । पुरुष स्पर्धाको फाइनलमा भारतले पाकिस्तानलाई ३–२ ले पराजित गर्दै स्वर्ण जित्यो । भारतका विजयकुमार यादव, दिवेश र जोवनदीप सिंहले जित हात पार्दा पाकिस्तानका शाह हुसेन र नदिम अक्रमले मात्र विजय हासिल गरे ।
महिला टिममा रजत पदक जितेको नेपाली टोली ।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ
प्रदर्शनप्रति प्रशिक्षक असन्तुष्ट
नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक वीरेन्द्र रञ्जितले प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नेपालले कम्तीमा ५ स्वर्ण जित्ने दाबी गरेका थिए । निकै अपेक्षा गरिएका खेलाडी फुपुल्हामु र मनीताले भारतीय खेलाडीसँग जित्न नसक्दा नेपाल पुरुषतर्फ जितेका दुई स्वर्णमै सीमित भयो । व्यक्तिगततर्फ नेपालका ६ खेलाडीले रजत पदक जिते । नेपालका लागि सबै फाइनलमा भारतीय खेलाडी बाधक बने ।
नेपाली खेलाडी भारतका प्रतिद्वन्द्वीसँग पराजित हुनु टेक्निकको नभई मानसिक कारण मुख्य भएको प्रशिक्षक रञ्जितको बुझाइ छ । ‘हाम्रा धेरै खेलाडी भारतीय प्रतिद्वन्द्वीसँगै पराजित भए । उनीहरू र हाम्रो टेक्निकमा हामी अझै माथि छौं होला । तर मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रा खेलाडी कमजोर देखिए । खेलाडीको शक्तिसञ्चयमा पनि हामी केही पछाडि परेका छौं,’ उनले भने । प्रतियोगितामा नेपालले दुई स्वर्ण जित्दा एक स्पर्धामा मात्र भारतीय खेलाडी पराजित भए । इन्द्रले ६६ केजीको सेमिफाइनलमा अंकित विष्टलाई हराएका हुन् ।
प्रशिक्षक रञ्जितले नेपालको प्रदर्शनमा धेरै सुधार गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘ हामीले यस च्याम्पियनसिपमा अझै सुधार गर्ने स्थान थियो । अब आउने प्रतियोगितामा हामीले के–कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने पनि यसले प्रस्ट पारेको छ । सम्बन्धित निकायले उचित सुविधा र प्रशिक्षण कार्यक्रम दिएको अवस्थामा हामीले एसियाली खेलकुद र सागमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौं भन्ने देखिएको छ,’ उनले टुंग्याए ।
आठौं दक्षिण एसियाली जुडो पदक तालिका
भारत १० ० ३
नेपाल २ ६ १३
पाकिस्तान २ ३ ३
श्रीलंका ० ३ ५
बंगलादेश ० २ २
भुटान ० ० १
कुल १४ १४ २७
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७५ ०७:३५